Barcelona Iyo Juventus Oo Isdhaafsanaya Pjanic Iyo Bentancur – Garsoore Sports
Barcelona Iyo Juventus…
Barcelona Iyo Juventus Oo Isdhaafsanaya Pjanic Iyo Bentancur
Waqtiga Miralem Pjanic ee kooxda Barcelona ayaa laga yaabaa inuu soo idlaado xagaagan, kaddib xilli-ciyaareed adag oo uu ka hoos cayaaray kooxda tababare Ronald Koeman, Cayaaryahanka iyo kooxda labaduba waxay ka fikirayaan inay kala fogaadaan. Sida laga soo xigtay RAC1, wuxuuna Pjanic kusoo laaban karaa gurigiisii hore ee Juventus.
Warbaahinta aanu kor kusoo xusnay ayaa dhowr toddobaad kahor, sheegtay in Barcelona iyo Juventus uu kulan dhexmaray si ay uga wada xaajoodaan una falanqeeyaan suurtagalnimada heshiis is dhaafsi ah oo ay ku lug leeyihiin cayaaryahanada Pjanic iyo Rodrigo Bentancur, Pjanic ayaa ku laaban kara kooxda Cajuusta halka xiddiga reer Uruguay uu u saxiixi doono Barcelona heshiis la mid ah kii uu Pjanic ugu soo wareegay Barcelona halka Arthur Melo uu u saxeexay kooxda Juventus.
Barça ayaa sannado badan la socotay xaaladda cayaaryahan Rodrigo Bentancur oo 23 jir ah. Waa la arki doonaa haddii wadahadaladu ay sii socdaan, iyadoo labada dhinacba ay u furan yihiin inay dib u soo qaadaan wadahadalada markale marka xilli ciyaareedku dhammaado maadaama lasoo warinayo in Xidhiidhka wanaagsan ee labada naadi u dhaxeeya uu gacan ka geysan karo suurtagalnimada heshiisyadan isdhaafka ah.
Xilli ciyaareedkan, Pjanic wuxuu ciyaaray 1,275 daqiiqo guud ahaan 28 kulan. Ciyaaryahanka khadka dhexe ayaan kubbad cayaarin tan iyo bishii Maarso, markii uu kursiga keydka ka soo kacay kulankii Paris Saint-Germain iyadoo Barca ay laga saaray tartanka Champions League-ga. Tan iyo markaas, ma uusan ciyaarin hal daqiiqo.
Dhanka kalena xiddiga ay Barcelona xiiseeyneyso ee Rodrigo Bentancur ayaa kaliya heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixay Juventus xagaagii, taasoo la micno ah in 23 jirkani uu haatan qandaraas kula jiro kooxda Bianconneri ilaa bisha Juun ee sannada 2024.
Man United Oo Dhowaan Lasoo Saxiixaneysa Jadon Sancho
Arsenal Iyo Milan Oo Isku Heysta Saxiixa Ryan Bertrand